Umama wehlobo leZimbo zokunxiba - Umtshato Dresses
Umama wehlobo leZimbo zokunxiba
Izitayile zokunxiba zasehlotyeni zikamama womyeni zinokuba bhetyebhetye kakhulu. Kubalulekile ukuqwalasela uhlobo lomtshato, ukuba lusesikweni kangakanani, kunye nendawo ekuya kuyo xa usenza isigqibo ngesinxibo.
Ukukhetha uMama weHlabathi weSinxibo somyeni
Ngokwesiko, umama womtshakazi ukhetha ilokhwe yakhe kuqala, kwaye emva koko azise into aceba ukuyinxiba kunina womyeni. Oku kuthathwa njengokufanelekileyoIndlela yokunxiba. Xa le kwabelwana ngayo,imibala yokunxibakunye nezitayile zinokunxibelelana ukuze yonke into ibambane. Kumtshato wasehlotyeni, indawo okanye umsitho womtshato unokukhululeka ngakumbi, ke oomama bobabini umtshakazi nomyeni banokungakhathali. Nangona kunjalo, izinto ezibalulekileyo ekukhetheni isinxibo zibandakanya:
Yiwa Umama weZinto zokuKhetha uMyeni
Isinxibo somtshato waselwandle kuMama woMtshakazi
Ubume bomtshato wasehlotyeni
Usemthethweni kangakanani umtshato? Nangona ihlobo livula ithuba kwiindawo ezininzi zangaphandle kunye nezitayile zomtshato ezingaqhelekanga, qiniseka ukuba uyazi inqanaba lokusesikweni, ixesha kunye nendawo yomtshato xa ukhetha indlela yokunxiba. Ixesha losuku liza kudlala-imitshato yasemva kwemini ihlala ixhaphake kakhulu kunemicimbi yangokuhlwa, nokuba yeyiphi na indawo.
Thetha kunina womtshakazi: Yisiko ukuba umama womtshakazi ukhetha ilokhwe yakhe kuqala, kodwa ungabi nazintloni ngokuxoxa ngayo. Ukuba ukhetha inani elifutshane leentyatyambo kumtshato wangokuhlwa wasehlotyeni, unokuziva ulungile ngokukhetha ukujonga okufanayo.
Inja yam izakuzala nini ikhalityhuleyitha
Ukukhetha imibala elungileyo
Musa ukugqitha umtshakazi (okanye abatshakazi): Ngelixa imibala engathathi hlangothi ithandwa kuzo zombiniOomama bomyeni nomyeni, Ukunxiba ezimhlophe ngekhe kulunge. Awufuni kumgqitha umtshakazi. Ukongeza, kunqande ukukhetha imibala efanayo enxitywe ziintombi. Imibala egqwesileyo yehlobo ziipinki, tyheli, orenji, blues, imifuno , nangaphezulu - umama womtshakazi wayenokunxiba ngokulula i-navy kumtshato wasehlotyeni kunye neelokhwe zasebukhosini kunye neelbouflower ezityheli. Ukuprintwa lukhetho olufanelekileyo kwimitshato engekho semthethweni.
Nxiba ilokhwe yonyaka. Zama ukuqinisekisa ukuba ilokhwe oyikhethayo ilifanele ixesha lonyaka. Abanye oomama banokufuna ukunxiba umbala omnyama njengamnyama kuba uncipha, okanye bakhethe imikhono emide kuba banokufihla iingalo ezingaphantsi kweetoni, kodwa khumbula ukuba lo ngumhla wakhe. Umbala okhanyayo, oqaqambileyo, othambileyo okanye ongathathi hlangothi ongabalulekanga kakhulu kuyindlela elungileyo yomtshato wasehlotyeni oza kujongeka ngokufanelekileyo, ukuze ujongeke kwaye uzive ungcono ngelixa ubeka umtshakazi nomyeni ngokukhululeka. Ukuba unezinto ofuna ukuzifihla, ukusonga okungasindi okanye i-boleros kunye neelaphu ezizezona zikhethekileyo.
Ukuqwalaselwa kukaMama woMyeni weZinxibo zasehlotyeni
Zininzi izinto eziza kudlala xa kufikwa ekukhetheni ilokhwe. Into ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele ukuba iqhubeka nini kwaye phi.
Ukuba kusasa, imini, okanye umtshato wasemva kwemini, okanye ukuba indawo ibekwe ngaphandle okanye ikwicala eliqhelekileyo, zininzi izinto ezifanelekileyo onokukhetha kuzo ezingekho kwicala elisesikweni. Oomama bomyeni banokujonga ubude beti, ubude obuphakathi, okanye iilokhwe ezinde ze-cocktail, kunye nelokhwe ezinde ezikhululekileyo. Izitayile ezihambayo, iintyatyambo, iilokhwe ezikhanyayo okanye ezinemodeli nazo zilulungele olu hlobo lomtshato.
Ukuba umtshato wasehlotyeni uqhubeka kwingokuhlwa, okanye kwindawo esesikweni ngakumbi, ilokhwe yangokuhlwa yeyona ilungileyo. Ngaphandle kokuba bacelwe ukuba banxibe mnyama ngumtshakazi, oomama akufuneki banxibe mnyama. Unokufuna ukubonisana nomtshakazi malunga nombala othile, kodwa ukhetho olufanelekileyo iya kuba kukuhamba ngokukhanya okukhanyayo okanye okumnyama kwitheko lomtshato okanye imibala yomtshato, okanye ngombala ongathathi hlangothi onjenge-navy, blush, burgundy, okanye abanye.
izinto ekumele zithethwe emnxebeni
Imitshato yaselwandlelukhetho olukhethiweyo lwasehlotyeni, kwaye lusenokukushiya uzibuza ukuba kufanelekile ukunxiba ntoni. Ubume bomtshato kusafuneka buthathelwe ingqalelo. Ukuba umtshato usemthethweni okanye uqhubeka ngokuhlwa, ilokhwe elula yokuhlwa iya kufaneleka. Ukuba icwangciswe njengomtshato ongacwangciswanga kwaye / okanye yenzeka emva kwemini, isinxibo esingekho sikweni kunye nobude obufutshane buya kwamkeleka. Kuphephe sundresses okungaqhelekanga kwaye Ukunxiba ngokungafanelekanga elwandle .
Cinga ngeendlela ezahlukeneyo ezikuncedayo kwaye usebenze kakuhle ngexesha lonyaka njengoko kusondela umtshato!
Ieleyisi eziLuhlaza zeLandi eziBomvu
Ingubo kwi-pastel entle yeelekese, enje ngombala oluhlaza we-mint, eyenziwe ngeeleyisi lukhetho olunokwenzeka koomama begadi. Ukujongwa kobude bamadolo kufanelekile kumtshato oqhelekileyo okanye ongaphandle, kwaye intamo ethobekileyo yesitayile kunye nesitayile esingenamikhono siyenza ukuba ibe lixesha kodwa ingadluli. Ileyisi inikezela ngenkangeleko ethambileyo ehamba kakuhle nokukhanya, okuqaqambileyo komtshato wehlobo.
Ukunxiba okungathath'icala ngejezi elula
Kumtshato oqhelekileyo wasehlotyeni ngokuhlwa, ilokhwe elula ende embala ongathathi hlangothi, njengegrey sheere ebonisiweyo lukhetho. Ukuba inemitya ye-spaghetti yemikhono ye-cap, ibhangqe ngesongelo esincinci okanye ijezi, njengesiqwenga sepesika esivulekileyo apha, ngenkangeleko entle.
Umbala ogqamileyo njengombala obomvu unokusebenzela umtshato wasehlotyeni, ukuba awuphikisani nemibala yomtshato. Le lokhwe ibomvu indala enoshicilelo omnyama nengwevu kunye nemikhono emide lukhetho oluhle kwabasetyhini abafuna imikhono kunye nobude obude, Qinisekisa ukuba ilokhwe yenziwe ngelaphu elikhaphukhaphu ukuze uhlale upholile ngexesha lomsitho kunye nokubhiyozela. Le ndlela ikhululekileyo ikwalungele nomtshato oqhelekileyo.
Ingxowa elula engathath'icala
Isinxibo se-sheath lukhetho olukhulu kuba luyacaba kwiintlobo ezininzi zomzimba. Idolo okanye ubude iti isebenza kakuhle ehlotyeni, kwaye umbala ongathathi hlangothi njengesilayiti uya kusebenza nayo nayiphi na imibala yomtshato. Ukunxiba ukujonga ilokhwe elula yesheath, cinga ukugxininisa kwinkangeleko yeleyile bolero kunye nobucwebe obuhle.
Ngaba utata kaJohn unayo i-pizza yasimahla ye-gluten
Isinxibo seBlush Ngemikhono yeKap
I-Blush (phantse i-pinki engathathi hlangothi) ngumbala odumileyo xa kuziwa kwilokhwe yoomama bomyeni. Lo mbala uyathandeka kwiithoni ezininzi zolusu, usebenza kakuhle kwiintsapho ezininzi ezinombala, kwaye ujongeka ulula, ukhangeleka ulungile ehlotyeni. Ukukhetha isitayile esigelezayo esinemikhono ye-cap kuya kugcina ubushushu behlobo kwaye kubonakale kufanelekile kwiintlobo ezininzi zomtshato zasehlotyeni. Ukuba isesikweni ngakumbi, nangona kunjalo, hamba nexesha elide lokunxiba.
Imikhono emide engenamikhono ye-V-Neck
Ubude obude bengubo enje buyenza isemthethweni ngakumbi. Kodwa i-v-style neckline kunye nokujonga okungenamikhono kuyenza ibe mfutshane. Khetha izinto ezisemthethweni, ezinje nge-taffeta, ngenkangeleko entle ukuba ayisiyonto nje eqhelekileyo. Ithoni emdaka ephakathi ayithathi cala ngokwaneleyo ukuba isebenze kunye nemibala emininzi yomtshato wasehlotyeni.
yintoni oza kuyifaka kwisipaji sakho
Ubude obugcweleyo ngengubo yokuhombisa
Isinxibo sobude obugcweleyo silungele ukutshata kwasehlotyeni, kwaye umbala we-beige ukuya kwi-taupe usebenza kakuhle koomama begadi. Isitayile esingenamikhono silungile ehlotyeni, ngelixa ubude obude busenza ukuba sibe sesikweni ngakumbi. Ukongezwa kwe-embellishment, njengoko kubonwe apha ecaleni kwe-neckline, nayo yenza ingubo ekhethekileyo.
Umbala omnandi wehlobo, njengoluhlaza okotshani wehlathi, ujongeka umhle xa ubhangqwe yibhodi yendlela yokukhohlisa. Ukuhonjiswa okutyebileyo kwi-bodice yeyona nto ilungele umtshato osesikweni. I-empire-esinqeni skims ngaphezulu kwehips, ke jonga oku kuhle kakhulu koomama abanqwenela ukufihla isisu okanye ihip indawo yengxaki.
Uhlobo lweMermaid-Uhlobo lweGown
Umqala ophakamileyo wale gawuni ususa inkangeleko enomtsalane kwimo yayo ifakelwe mermaid uyilo. Iipaneli ezimiselweyo kwicala ngalinye lesinqe zinceda ukunciphisa i-waistline, ngelixa elingenamikhono, halter I-silhouette ilungele ihlobo.
Ukunxiba kwehlobo elinamanzi kunye nePleats
Isinxibo sasehlotyeni esinokuhamba, iseti yobude beeti kunye nemikhono yekepusi, lolunye ukhetho olunokubakho koomama bomyeni. Khangela izitayile ezenza ukuba umzimba wakho ubukeke ungcono, nokuba bubukhosi besinqe (efihla isinqe kunye nesinqe kwi-apile kunye neemilo zepeyari) okanye isinqe sokwenyani (siphucula inani leglasi elirhabaxa).
Ubude obude-begxalaba kubude obude
Isinxibo sobude obuphakathi sisebenzela umtshato wasehlotyeni xa sinesitayile esinga-egxeni, sisenza ukuba siqheleke kwaye sihle. Inkangeleko enjengale ilungile kwimitshato esebenzayo, njengomtshato kwiJustice-of-the-Peace okanye umtshato omncinci onabahlobo kunye nosapho nje oluncinci. Kwimikhono emide, qiniseka ukuba umtshato wenzeka emva kwemini okanye ngokuhlwa, okanye uqiniseke ukuba ilaphu elikhaphukhaphu, nelinokuphefumla.
Izitayile zokunxiba zasehlotyeni zosuku olukhethekileyo
Ukukhetha ilokhwe elungileyo yomtshato wonyana wakho akunzima- kuthathela ingqalelo ixesha, indlela, kunye nendawo yomtshato, kwaye ungalibali ukulungelelanisa nonina womtshakazi. Ngaphandle koko, ngumcimbi wokufumana umbala kunye nesitayile esikwenza uzive ungakholeki njengoko ubhiyozela olu suku lukhethekileyo.
Inja Training Umlibo Wokuzalwa Uphando Ukutya Kukhuseleko Ukondla Umntwana San Francisco Bay Area Arts Usetyenziso Lwewindows Kwi- Ivenkile Yewindows
izipho zomolokazana ngosuku lomtshato
igama into esihla inyuka
susa i-grout haze kwi-tile ngeviniga
Imibongo esuka kumama iye kunyana wakhe
igqwirha lesishwankathelo sedama elimnyama
ngokwasentlalweni yintoni usapho oludibeneyo
Ixabiso eliphakathi leyunithi yokugcina